7-da June: Maalinta caalmiga ah ee badbaadada cunnada | Radio Himilo
Home / Caafimaad / 7-da June: Maalinta caalmiga ah ee badbaadada cunnada
Posted by: Mahad Mohamed June 7, 2020
Himilo – Waa sannadkii labaad oo la xusayo maalinta Badbaadada Cuntada Adduunka iyada oo sannad kasta 7-da Juun loo dabaal deggo si loo dhiirri geliyo ficillada lagu caawinayo ka hortagga, ogaanshiyaha iyo maaraynta halista cuntada soo wajaheysa, islamarkaana gacan laga geysto sugnaanta cunnada, caafimaadka aadanaha, barwaaqada dhaqaalaha, beeraha, helitaanka suuq, dalxiiska iyo horumar waara oo sal u ah maalintan.
Kaddib dabaaldeggii ugu horreeyay ee 2019, sannadkan mar kale WFSD waxay xoojineysaa baaqa si loo xoojiyo ka go’naanshiyaha kor u qaadidda amniga cuntada ee looga arrinsaday shirarkii Addis Ababa iyo Geneva Forum ee 2019 iyada oo la adeegsanayo aragtida ah “Mustaqbalka Badbaadada Cunnada”. WHO, oo kaashaneysa Ururka Cunnada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO) ayaa fududeysay dadaallada dowladaha xubinta ka ah inay u dabaal deggaan Maalinta Nabdoonaanta Cunnada Adduunka.
Hal-ku-dhegga sannadkan ayaa noqonaya “Badbaadada cunnada, qof waliba ayay shaqadiisa tahay”, ololahan ayaa dhiiri gelin doona wacyiga amniga cunnada adduunka taasi oo qof waliba laga doonayo in doorkiisa uu ka cayaaro sidii loo heli lahaa cunno bad qab ah.
Caafimaadka cunnada waa midka koowaad ee asalka u ah helidda caafimaad qofeed, haddaba maalintan naftaada ayaya wacyi gelinaysaa si aad ugu ammaan hesho cunno aan sugneyn badqabkeeda.
Cuntooyinka aan habbooneyn waxay keenaan cudurro sida bakteeriyada waxyeelada leh, fayrasyada, ku dulnoolayaasha ama walxaha kiimikada ah, kuwaasi oo keena in kabadan 200 cudur – oo ay kamid yihiin shubanka iyo kansarka.
Qiyaastii 600 milyan – ku dhawaad oo kamid ah 10-kii qof ee dunida ku nool – ayaa wajaha xannuun sabab la xiriirta adeegsiga cunno aan la mahdin iyada oo 420,000 u dhintaan sannad walba, xilli sidoo kale uu nusqaan ku yimaado 33 milyan sanno oo nolosha caafimaadka ah.
Dhibaatooyinka laga dhaxlo sugnaan la’aanta cunnada waxaa kamid ah in caruurta ka yar 5ta sanno ay sannad waliba dhintaan 125,000.
Cudurrada shubanka ayaa ah cudurada ugu badan ee ka dhasha qaadashada cuntada wasakheysan, taasi oo keenta in 550 Milyan oo qof ay cururro soo wajahaan iyadoo 230,000 oo qof ay sannad waliba u dhintaan.
Previous: West Ham United oo hoggaamineysa tartanka loogu jiro Batshuayi
Next: Farriin caafimaad oo u digaysa ragga aan khuraacan!